GNOME 41 na -abịa na ndozi nhazi, ogwe, ngwa na ihe ndị ọzọ | Site na Linux
Ọchịchịrị | 22/09/2021 10:17 | Emelitere ka 23/09/2021 00:32 | Aplicaciones
Mgbe ọnwa isii nke mmepe mwepụta nke mbipute ọhụrụ nke desktọọpụ GNOME 41 nke na -abịa na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mgbanwe dị mkpa nke kacha mkpa nke pụtara ìhè bụ ọmụmaatụ ịgbasa ohere nke ịhazi oriri ike.
A na -enye ike ịgbanwe ọnọdụ ike ọkụ ngwa ngwa site na menu njikwa sistemụ. Ngwa nwere ikike ịrịọ otu ụdị ike oriri; dịka ọmụmaatụ, egwuregwu ndị na-emetụta arụmọrụ nwere ike ịrịọ ka arụ ọrụ dị elu rụọ ọrụ.
Ihe ọhụrụ ọzọ a na -enye bụ nhọrọ ọhụrụ iji hazie ọnọdụ nzọpụta ike, na -enye gị ohere ijikwa mbenata ihuenyo, gbanyụọ ihuenyo mgbe oge ọrụ adịghị arụ ọrụ, wee gbanyụọ ya na akpaghị aka mgbe batrị dị ala.
E wezụga nke ahụ edozigharịrị interface iji jikwaa nwụnye ngwa, nke na -eme ka igodo dị mfe na ịchọ mmemme nwere mmasị. Emebere ndepụta ngwa ahụ ka ọ bụrụ maapụ nkọwa karịa yana obere nkọwa. A tụpụtala ụdị edemede ọhụrụ iji kewaa ngwa site na isiokwu.
Ọzọkwa E degharịrị ibe ahụ nwere ozi zuru ezu gbasara ngwa ahụ, nke agbakwunyere ogo nseta ihuenyo yana abawanyela ozi nke ngwa ọ bụla. Na mgbakwunye, edozigharịrị ntọala ntọala yana ndepụta nke mmemme na mmemme arụnyere maka nke enwere mmelite maka ya.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịchọta nke ahụ a gbakwunyere panel ọhụrụ nke nwere ọtụtụ ihe na nhazi (GNOME Control Center) iji hazie windo na njikwa desktọọpụ.
Karịsịa, na ngalaba Multitasking, a na -enye nhọrọ iji gbanyụọ oku ọnọdụ nyocha ịpị akuku aka ekpe elu nke ihuenyo ahụ, megharia windo ya site na ịdọrọ ya na nsọtụ ihuenyo ahụ, họrọ ọnụ ọgụgụ desktọpụ ndị mebere, igosi desktọpụ na ihe nleba anya jikọtara ya, na ịgbanye n'etiti ngwa naanị maka desktọpụ ugbu a site na ịpị Super + Nchikota Tab.
Gụnyere a gụnyere ngwa njikọ ọhụrụ yana mmejuputa ndị ahịa maka njikọta desktọọpụ dịpụrụ adịpụ site na iji usoro VNC na RDP. Ngwa ahụ na -anọchi arụmọrụ maka ịnweta desktọọpụ dịpụrụ adịpụ nke enyere na Igbe.
E degharịrị nhazi okirikiri egwu GNOME, nke agbakwunyere nha nke eserese, agbakọtawo akụkụ ya, agbakwunyere ngosipụta foto ndị na -agụ egwu, emezigharịrị ngalaba njikwa playback.
Nke mgbanwe ndị ọzọ nke kwụpụtara:
Emebela isi koodu njikwa windo Mutter ka ọ ka mma arụmọrụ yana mee ka mmezi ya dị mfe.
Kachasị interface arụmọrụ na responsiveness.
N'ime nnọkọ dabere na Wayland, agbalitela ọsọ nke imelite ozi dị na enyo yana oge mmeghachi omume maka mmegharị igodo na mkpagharị cursor.
Ịkwado ntụkwasị obi na ịkọ amụma nke njikwa mmegharị ọtụtụ aka.
N'ime onye njikwa faili Nautilus, emezigharịrị mkparịta ụka maka ijikwa mkpakọ yana agbakwunyere ikike ịmepụta ebe nchekwa ZIP echekwara.
Kalenda nhazi ugbu a na -akwado mbubata ihe omume na imepe faịlụ ICS.
Ejila ozi gbasara emume a tụpụta ndụmọdụ ọhụrụ.
Ihe nchọgharị Epiphany emelitere onye na-ekiri PDF PDF.js ma gbakwunye ihe mgbochi mgbasa ozi YouTube dabere na edemede AdGuard.
Agbakwunyere ngalaba Mobile Network ọhụrụ iji jikwaa njikọ ahụ site na ndị na -arụ ọrụ na ekwentị.
Emegharịrị ihe ngosi ihe mgbako ahụ kpamkpam, ugbu a na -emeghari na nha ihuenyo na ngwaọrụ mkpanaka.
Agbakwunyere nkwado maka edemede na sistemụ ngosi.
GDM ugbu a nwere ikike ịmalite nnọkọ dabere na Wayland ọbụlagodi na ihuenyo nbanye dabere na X.Org.
A na -anabata nnọkọ Wayland maka sistemụ nwere NVIDIA GPUs.
Diski Gnome na -eji LUKS2 maka izo ya ezo. Agbakwunyere mkparịta ụka iji hazie onye nwe FS.
Igbe GNOME na -agbakwụnye nkwado maka ịkpọ ụda site na gburugburu na -eji VNC jikọọ.
Otu esi enweta ma ọ bụ nwalee ụdị Gnome 41 ọhụrụ?
Maka ndị nwere mmasị nyocha ngwa ngwa nke ike GNOME 41, a na -ewu ụlọ ndụ pụrụ iche dabere na openSUSE na onyonyo arụnyere nke akwadobere dịka akụkụ nke atụmatụ GNOME OS, gbakwunyere GNOME 41 na ntinye nnwale Fedora 35.
Mgbe akụkụ nke ngwugwu maka nkesa dị iche iche, ndị a ga -erute n'ime ebe nchekwa ihe ndị a n'ime awa ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GNOME 41 na -abịa na ndozi mmegharị, ogwe, ngwa na ihe ndị ọzọ